Brazing Carbide-Simbi Turu ine Induction induction kupisa muchina mugadziri | induction kudziya mhinduro
Chinangwa: Ipai mhinduro iyi yekushandiswa kwesimbi-carbide kushandiswa Zvinhu • Mutumbi 10mm; carbide tip 57 x 35 x 3 mm • Braze shim
Kutya: 750 ° C (1382ºF)
Kakawanda: 150 kHz
Zvishandiso DW-UHF-20KW kupisa induction system, yakagadzirirwa necheni yekupisa iri kure ine (2) 1.0 μF capacitors (yehuwandu hwe0.5 μF) A 4.5-helical induction yekupisa coil yakagadzirirwa uye yakagadzirirwa zvakanyanya kunyorera ichi.
Nzira: Muviri shim necarbide zvinoshambidzwa uye zvinosungirirwa kushandiswa sezvinoshandiswa kumativi ose ekereke. Zvikamu zvinowanikwa pamwechete mu induction coil. Zviratidzo zviviri zveedamic zvinobva zvagoverwa kuti coil inopesana kuti ibate zvikamu panguva yekupisa. Iyo kubuda kune zvikamu kunobvumirwa kuomeswa vasati vapisa. Iko kushandiswa kwemhepo inopisa kunoshandiswa kusvikira bhururu ruchiyerera mubatanidzwa.
• kutaridzirwa kupisa kwekubatana kwebasa kunoshanda
• nzira isina chaanopomerwa inonyatsojeka, inogona kudzora
• migumisiro inowanikwa
Categories Technologies Tags brazing carbide iron, Brazing carbide kusimbi, Brazing Carbide-Steel Tool ne Induction, Indonesian Induction Brazing Carbide, RF Brazing System